Nahita Ampahan-dalana Inca Vaovao Akaikin’i Machu Picchu Ny Mpikaroka Ao Però · Global Voices teny Malagasy
Nahita Ampahan-dalana Inca Vaovao Akaikin'i Machu Picchu Ny Mpikaroka Ao Però
Voadika ny 20 Jona 2014 4:55 GMT
Vakio amin'ny teny English, Aymara, বাংলা, Italiano, Français, русский, Português, 日本語, polski, Español
Machu Picchu. Sary tao amin'ny Flickr avy amin'ny szeke. CC BY-NC-SA 2.0.
Mety ho tanàna fahagola i Machu Picchu, saingy mbola misy ireo zava-baovao tsara ho hita. Nisy ampahan-dalana Inca vaovao, sakeli-dalana namboarin'ny ampira Inca hita indray, ary ny sasany tamin'izany (efa) malaza eo amin'ireo mpananika amin'izao fotoana izao mizotra mankany Machu Picchu ao Cusco, Però amin'izao fotoana. Miala avy ao Wayraqtambo (Hotely Rivotra), ambadik'i Machu Picchu izany ary mankany amin'ny toerana fitazanana izay manome toera-pijerena tokana mahita an'i llaqta Inca (tanàna kely) izany.
Namoaka fanambarana tao amin'ny habakany ny Sampan-draharahan'ny Kolontsaina itsinjaram-pahefana ao Cusco, izay navoakan'ny habaka Cusco 2.0 indray koa:
Manana halavana iray kilaometatra sy sasany eo ho eo ilay lalana mahavariana ary manana sakany eo ho eo amin'ny 1,20 sy 1,40 metatra eo, miovaova arakaraky ny topografian'ny tany izany. Mbola tsy hita tanteraka izany satria voasaron'ny zavamaniry, saingy noho ny asan'ireo ekipa mpikaroka avy amin'ny Valan'i Machu Picchu, dia efa voaisotra ny kirihitra sy ireo hazo izay mandrakotra azy, dia izayno nahitana rindrina mihiboka vita Inca izay mahatratra 3 metatra ny haavony.
Nandritra izany fotoana izany, nanamarika ny habaka Mystery Planet hoe:
25 isan-jaton'ny zotran-dalana Inca ihany sisa no hita ankehitriny. Ny ambiny kosa noravain'ireo mpanani-bohitra efa ela be na noravan'ireo tranobe maoderina vao haingana. Na dia izany aza, nambaran'ireo mpikaroka tao Machu Picchu ny fahitana vao haingana ny ampahan-dalana vaovao […] miorina ao ambadiky Machu Picchu, eo anelanelan'ny toerana arkeolojikan'i Wiñay Huayna sy Intipata.
Niditra lalindalina ny gazety La Nación:
Ny Sakeli-dalana Inca (Qhapaq Ñan, amin'ny tenin'ny teratany) dia fitambaran-dalana manakaiky ny 40000 km izay mampitohy an'i Però, Chile, Kolombia, Ekoatera, Arzantina ary Bolivia ary nifarana nandritra ny ampira Inca ny fanamboarana tamin'izany, ka ny ampahany lehibe indrindra dia ao Però.
Niara-nangataka tamin'ny ONU ireo governemanta marobe mba hanambara ny Sakeli-dalana Inca ho Toerana Lovan'Izao tontolo izao.
Nizara ny vaovao tao amin'ny Twitter ny mpiserasera, ary maro tamin'izy ireo no nandefa sary misy ny toerana masina ao Cusco:
Lalana vaovao ao Inca mankany Machu Picchu no hita. 1,5 km ny halavany ary afaka mahita tonelina Inca ianao amin'izany.
[LAHATSARY] Sakeli-dalana Inca mankany Machu Picchu no toeran-kaleha ankafizin'ireo “mpanao dia lavitra”.
Na dia ireo mpisera Katalana sasany aza mba nizara ny vaovao ihany koa:
Sampan-dalamby Inca 500 taona mankany Machu Picchu hita vao haingana. Takona tao anaty alan'ny andro mafana izany.